Kwabaningi abashayeli imoto - akuyona nje izindlela zokuhamba, kodwa futhi-accessory ye-fashion. Abashayeli kuyothuthuka ke, sebenzisa izinhlobo ezahlukene Tuning. Ngenxa ingilazi anombala abakwazi kuphela uthuthukise ukubukeka umshini, kodwa futhi ukuvikela ngamehlo azo elangeni. Nokho, lokhu kuvuselelwa kungaholela umlandu yokutakula umshayeli. GOST ngoba toning is hhayi wonke umuntu ezaziwayo. Ngalo, ungafunda ku-athikili yethu.
Toning ngamafasitela imoto kunezinzuzo eziningi. Njengoba abashayeli belokhu beqhubeka bekhetha ukuze asithe amafasitela imoto yakhe njalo ngonyaka. Ikakhulukazi ziphoqa lokhu Tuning ngesikhathi sasehlobo. Kuvikela ingaphakathi imoto okweqile. Akusiyo imfihlo ukuthi kusukela lokushisa eziphakeme izihlalo ezifudumalayo, futhi kukhona kungenzeka ukuthi umzimba plastic zikagesi esakhelwe angase inqamuke. toning Ngenxa, saloon imoto uzobuyisa ngayo kuqala isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Anombala amawindi imoto uvumele ukucashela prying konke okwenzekayo ngaphakathi. Lokhu kuzokwenza ukuvikela izinto zakho siqu emotweni ngokumelene ukweba. Kuyinto waseLenasia kunzima ikakhulukazi okuzofundwa ingaphakathi black esikhwameni noma esikhwameni.
Ngokuvamile, amafasitela ezingemuva emotweni zakhiwe ingilazi omnene. Uma negalelo elinamandla bona asakazekele izingcezu ezincane bese kungabangela ukulimala kakhulu umgibeli. Engemuva iwindi tinting zizonciphisa ingozi yokulimala. Ngenxa Tuning ezinjalo, ngezinye izingcezwana ebuyile izohlala isebenza ifilimu.
Ethandwa kakhulu kuba toning zempi. It unawo ukushisa emotweni, futhi ivikela ingilazi kusukela imithelela futhi umonakalo.
izibuko Anombala nobuthaka bayo
Anombala ingilazi phambi kuletha ukungakhululeki umshayeli ngenkathi yasebusika. Lena ngenye yama-ubuthakathaka nendlela yawo ebanzi. Lapho Tinting kakhulu ziyancipha ukubonakala. It kuvimbela Tuning okunjalo futhi abashayeli abeza ngemuva kwakho. It kwandisa ingozi ukushayisana.
Ifilimu tinting kungenziwa banamathela kabi. Ngenxa yalokhu, le ingilazi ungakheka Bubbles uqhekeke noma imihuzuko. Lezi yokuntula kungenzeka izinsuku ezimbalwa emva isicelo se-ifilimu. Material of ukhwaliti ongaphakeme noma okunamathelayo ayilungile kungabangela esikhundleni kwanoma izibuko.
Le filimu "Intulo"
Gwema isigwebo unswinyo kuzosiza toning GOST. "Intulo" - ifilimu ukuthi unekhono ukushintsha svetopronitskaemost ngokuzenzakalelayo kuye ngokuthi ezingeni ukukhanya. Ingabe kuvunyelwe?
abashayeli abaningi bakholelwa ukuthi ifilimu "Intulo" namazinga isimo. Nokho, lo mbono unephutha. emafasiteleni toning kumele abe ukudluliswa ukukhanya okungenani u-70%. Lesi sibalo ivumela umbono ocacile endleleni. Nge Ukukhetha kahle ifilimu "Intulo," ngeke ulethe ukungakhululeki umshayeli futhi akavumi ukuba izinhlawulo izinhlawulo.
Le filimu "Intulo" yiliphi uhlobo mirror effect. Nokho, izinga layo akuyona benganhlanhlathi. Esimweni lapho amaphoyisa traffic protocol umshayeli ngenxa specular ngokweqile, umshayeli ongafaka isicelo enkantolo futhi afakazele ukuthi akanacala.
Ukufaka toning "Intulo" has a lot of umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Sebenzisa-ke phezu ingilazi kanzima ngokwanele. Uma inkosi ifilimu ngeke overheat kwezinye izindawo, lishintsha unaphakade umbala. Kungenxa yalesi sizathu-ke kuyadingeka ukuba sithembele kuphela tint kwabasebenzi abaqeqeshiwe futhi abanolwazi. Noma yimaphi amaphutha zizobonakala ngokubona okubonakala ngeso lenyama. Ukuze kuxazululwe le nkinga kuyodingeka ukushintsha ngokuphelele ingilazi. Izindleko ukufakwa ifilimu olushintsha umbala ngokuzenzakalelayo, ezisukela ruble ayizigidi 10.
ingilazi Anombala ngokuvumelana GOST
GOST ngoba toning akwaziwa zonke umshayeli. Nokho, ukungazi imithetho asikho isizathu esamukelekayo. tinting engalungile kungadala isigwebo unswinyo. Zonke izici umthethosivivinywa kufanele wazi yonke umshayeli. Nabo ungathola ku-athikili yethu. emafasiteleni Anombala has a ezicashile ambalwa. ukukhanya yabo transmittance kumele okungenani ibe 70-75%. Phezu isiphephelo somoya ke akuvunyelwe nhlobo ukusebenzisa imidwebo nemibhalo eqoshiwe. Awukwazi ukusebenzisa umbala ifilimu. Phezulu 14 amasentimitha we somoya kungenziwa mnyama ezingaphezu kuka the main okuyingxenye.
Translations umnyango ingilazi kungaba isukela 65%. Engemuva iwindi tinting kungenzeka kulekelelwa amafasitela ekhethekile. Noma kunjalo, kakhulu konakalise ukubonakala.
Lapho ungabheka ezingeni toning?
abashayeli abaningi abazi ezingeni yokudlulisela ukukhanya izibuko emotweni yakhe. Okwamanje, kukhona tinhlobonhlobo temasu isicelo ka toning. I kwabantu impahla akhethiwe inquma ngokuqondile ezingeni yokudlulisela ukukhanya emotweni. GOST ngoba tinting has a ezicashile mass. Ukuhluleka ukwenza njalo kungaholela hhayi kuphela inhlawulo. Ukuze ukuhlukumeza okunjalo traffic amaphoyisa angase ukuphuca amalungelo abonakele yokushayela.
Kunezindlela eziningana ezingasiza ukukala ezingeni yokudlulisela ukukhanya kule moto. Ungathenga idivayisi ekhethekile, futhi wenze izilinganiso bebodwa. Nokho, izindleko zayo impela high. Emva ukukala ukudluliswa ukukhanya emotweni yakhe, kanye izimoto abathandekayo, idivayisi ngeke zisaba kunesidingo. Uma ungenayo imali eyanele, sizobe batusa kakhulu kokuyithenga.
Izinga yokudlulisela ukukhanya kule moto kungabuye kulinganiswa esiteshini inkonzo. Le nqubo akuthathi isikhathi esiningi. Izokubiza umshayeli engabizi.
Izinga Translations Sokubambisana ingatholakala engosini ethi okuthunyelwe amaphoyisa omgwaqo eliseduze. Kufanele kuqashelwe ukuthi uma kwenzeka ukuthi kunqunywa ukuthi ifilimu tinting akusho ukuhlangabezana nezidingo traffic amaphoyisa waqoqela umbiko futhi kuzodinga ukuba bakhokhe ngokushesha ngangokunokwenzeka yokutakula.
Kanjani ukuba angadukiswa
Abaningi abazi ukuthi yonke imininingwane Bill toning. Avame ukukhohliswa. Indlela traffic amaphoyisa ihlolwe toning? Amaphoyisa omgwaqo ukuqapha ngokucophelela ukuqaliswa kwemithetho. Ukuze bayakhohliswa, ubuyekeze ukwaziswa okunikezwa kulesi sihloko.
Kuleso simo, uma uvinjwa amaphoyisa omgwaqo hhayi izilinganiso, uthi imoto yakho usezivalile toning, ungakwazi ngokuphepha baqhubeke. Setha ngenhla kuyinsakavukela kungaba esebenzisa idivayisi ekhethekile.
Uma amaphoyisa umsebenzi sezimoto abe idivayisi ekhethekile, qiniseka uqaphele ukuthi it has a uphawu futhi nenombolo ngamanye emzimbeni. Kuleso simo, uma ukushuba we ingilazi ku imoto yakho idlula 7.5 kwangu, banake igama yomculo. Kala tint emshinini wakho kuphela ngosizo apharathasi Blick +. Ukwenza izilinganiso enye idivayisi isisebenzi State Traffic Inspectorate angenalungelo lokukuthola.
Bambalwa abantu bazi lokhu, kodwa ukukala ezingeni tinting kungenzeka kuphela ngaphansi kwezimo ezithile sezulu. Izilinganiso okufanele kwenzeke kuphela isizini efudumele, lapho kungcono 15-25 degrees Celsius. Imvula nezinye kwezulu kufanele ingabi. kuhlolwa imoto izibuko kumelwe nakanjani zenzeke lapho ofakazi ababili. Izilinganiso zenziwa izindawo ezintathu ezahlukene.
Ukuze ugweme ukuhlawuliswa, izinhlawulo, ungafaka Anombala esikhiphekayo. It engashiywa nganoma yisiphi isikhathi.
GOST ngoba toning inikeza unswinyo lokujeziswa ngenxa yokwephula imithetho. Ngonyaka odlule, uhulumeni waseRussia kubhekwe izinguquko kwi-Bill. Ayenze amandla ngo-2016. Ngenxa izichibiyelo inani elimnandi kuqala liye landa ruble 1,500. Esimweni lapho umshayeli abonakele izoliziba okwashiwo esidlule, liyofunwa ukukhokha ruble Russian 5000. imvume Penal okuzokhishwa ezinyangeni ezingu-12 ngemva lenkinga. Bokuhlukaniswa ilayisensi yokushayela may kufikela kuzinsuku ezingu-90.
Yini ebangela lolu shintsho kule nkokhelo?
Izichibiyelo umthetho okusalungiswa toning azisuswanga zokuphola. Lokhu kungenxa yokuthi eminyakeni yamuva kuye kwanda isibalo mthetho. amaphoyisa Abasebenzi traffic zithi ukwanda kwenani abashayeli abonakele ngenxa yokuthi usanda, ungasusi amapuleti ilayisensi non-nesikhathi toning.
Ukukhula zamacala wayebuye ngenxa yokuthi ukuthi imvume yokujezisa, esalungiselelwa ukuze bill ubudala, hhayi isamba sina abashayeli kakhulu. Phakathi nengxenye yokuqala yeminyaka yawo ngonyaka odlule iye ikhishwe yezifiso kuka-500 eziyinkulungwane. Inombolo enkulu ukwephulwa babhaliswa ngokomthetho ngo-Moscow. Kukhona izinkulungwane 60 inhlawulo tinting ngokweqile iye ikhishwe kwikota yokuqala.
Traffic okuthunyelwe amaphoyisa bese uhlole izinga lokukhanya ukudluliswa ingilazi
Muva nje, ezidumile ikakhulukazi is anombala ingilazi. Standard inikeza izimfuneko eziningi imoto ukuhwalala. Kukhona amacala lapho traffic iphoyisa wayeka umshayeli aphume okuthunyelwe amaphoyisa omgwaqo wanikela ukuhlola ezingeni tinting. Umshayeli unelungelo lokwenqaba, ngisho noma umshini kungukuphula.
Umhloli angase waphinda nikeza kumthamo okuthunyelwe ukucacisa ezingeni tinting. Nokho, umshayeli ayikwazi basabela amazwi traffic iphoyisa futhi ukwenza okungaphezu kwalokhu.
Ubani ongafaka ukukala degree of Tinting ingilazi?
nezishoshovu zamalungelo abantu zithi isilinganiso ezingeni yokudlulisela ukukhanya izibuko kuphela inelungelo umuntu abaqeqeshiwe, okungukuthi umhloli State Technical Ukugada. Nokho, sokuchibiyela, okuyinto Waqala ukusebenza ngonyaka odlule, ukhulume iqiniso lokuthi manje hlola degree of tinting can iyiphi iphoyisa. Ukuze wenze lokhu, khona-ke kumelwe kube ophethe idivayisi ekhethekile, okuyinto ibhalwe inombolo futhi lifakwe kwiRejista State. Libuye saziso ukuba banake khona lwezimpawu. Uma kungaqali, umhloli unelungelo ukukala ezingeni yokudlulisela ukukhanya emotweni yakho.
ingilazi Anombala kuthandwa kakhulu phakathi abashayeli. Tuning okunjalo ongavikela ingaphakathi imoto kusuka lantambama, umonakalo kanye prying amehlo. Uma unquma ukubeka phezu imoto efasiteleni lakhe tint ke kuqala kunazo zonke ukuthola ngezisebenzi kakhulu. Siyabonga kuye for Tuning esihle. Kubalulekile ukuba pre-uhlole yonke imininingwane umthethosivivinywa uhambe bese ukukhetha arcade ifilimu. Kulokhu, wena ukuqeda ingozi kucutshungulwa wena unswinyo esihle Ukufiphala okungafanele.